SECES ANTANANARIVO: “Hampiharo ny lalana mamaly ny fangatahan’ny sendika”. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE SECES ANTANANARIVO: “Hampiharo ny lalana mamaly ny fangatahan’ny sendika”.
SECES ANTANANARIVO: “Hampiharo ny lalana mamaly ny fangatahan’ny sendika”.
By Nirinamai 31, 2017, 08:14 0
Mandeha hatrany ny fifampiresahana eo amin’ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mikaroka mpampianatra manoloana ny fitakian’ity farany. Nisy ny fampitam-baovao ho an’ireo mpikambana ao anatin’ny sendika sampana Antananarivo ny amin’ny ventin-kevitra nivoitra tamin’ny fifampidinihan’ny noresahan’ny roa tonta. Hatreto mbola tsy nahazo valin-teny mahafa-po ny SECES. Noho izany, mbola mihatra hatrany ny fampiatoana vonjimaika ny fampianarana.
Araka ny fanazavan’ny Filohan’ny SECES sampana Antananarivo, Sammy Georges RAVELONARIVO fa ny fampiharana ny lalana mandidy ny fanantanterahana ny fitakiana natao ihany no hangatahin’ireo mpampianatra mpikaroka sy mikaroka mpampianatra.
Ankoatra ny fampitam-baovao, nisy ny fanangonan-kevitra entin’ny SECES sampana Antananarivo hiatrehana ny filan-kevitra nasionaly izay tanterahina rahampitso 01 jona 2017.
Previous PostCUA: “Tsy maintsy hividianana fiara manokana ny Ben’ny Tanana”. Next PostINSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ACEEM : Mpianatra 120 nahazo diplaoma momban’ny fitantanana.